Xagee ku dambeeyeen ciidankii banneeyey furimaha dagaalka Tukaraq & fursaddii Puntland dayacday.
March 26, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (LAASCANAOOD)-Bishii la soo dhaafayey dhammaadkeedii ayey ahayd markii ciidamo katirsan kuwa difaaca ee Somaliland ay ka bexeen fariisimadii ay ku lahaayeen jiidaha dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Ciidamadaan oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka ayaa waxaa la sheegay inay gedood sameeyeen kadib markii ay waayeen mushaharkii ay laheeyn oo la xaqiijiyey inaysan xukuumadda Somaliland ka helin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Ciidnaka ayaa la sheegay inay ku qanci waayeen qorshihii ay u soo bandhigeen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidanka Somaliland oo booqashooyin ku yimid furimaha dagaalka Tukaraq taasi oo sababtay inay ugu dambayn gedood sameeyaan kana baxaan goobihii ay kaga sugnaayeen deegaankaasi.
Xog hoose oo ay heshay Puntlandtimes ayaa sheegaysa in ciidanka qaybo kamid ah dib loogu celiyey goobihii ay ka soo bexeen kadib markii uu madaxweyne Muuse Biixi bixiyey qaar kamid ah mushaharkii ka maqnaa balanqaadyona u sameeyey taliyayaasha hoggaaminaya ciidanka ku sugan furimaha dagaalka.
Puntland ayaa dayacday fursadda deegaanka Tukaraq mana jirin wax dhaqdhaqaaq ciidan ah oo ay ka samaysay deegaanka Tukaraq oo ay ciidanka Somaliland ka qabsadeen sanadkii 2018 xilli uu Garoowe ku sugnaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Been abuur iyo tashuush cadowga Somaliland meelahaa la wareegayay ayuu ahaa awlaba warkaasi,mana lahayn sal iyo RAAF,wuxuna noqday war aan jirin.
Somaliland iyo Puntland wax dhib ah ma dhex yaal sida Djibouti iyo SOMALILAND uusan u dhex oil, adigu ma dhiiga, tafaraaruqa iyo dhibka Soomaalida baa ka macaashtaa?.
NINKII COLAAD U DURBAAN TIMAYOW KA JOOG, FAAIIDO MAL LEH, REER SOMALILAND-NA WEY YAQAANAAN DAGAAL WUXU YAHAY. XUSUUSO TUORAQIYO RAQDII DAADSANAEYD, MAXAA LAGA FAAIIDEY.
Puntlandtimes waxaan ka saxayaa in iyaga media ahaan laga doonayo inay ka jawaabaan su’aalaha ay keenaan oo jawaab waafi ah ka bixiyaan. Haddii kale, goofani waa guri doonaa, oo waxaa kaliya oo soo gali doono inta beenta jecel.
Qoraalku hal qofna kama soo xigan dadka ama odayaasha Tukaraq, maamulka ciidama, kan Puntland.
Marka waxaa shaki kaa galayaa danta laga lahaa qoraalka iyo maalin walba in Puntlandtimes.ca soo qoro puntland waa la qabsadey, Warsamgeli waa la qabsaday iyo wlm.
Waxaa idin saaran xil ee ummaddiina wax bara oo ka hadla waxyaabaha ay dadku qabsan karaan ee aysan cidna ka sugin